လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအလေ့အထအကြားပျောက်ဆုံးနေ link ကို
သတင်းဘလော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက် Porn ကျင့်အကြားတွင်အဆိုပါပျောက်ဆုံးနေ Link ကို
adminaccount888 31st ဒီဇင်ဘာလ 2017 ပညာရေး, ကျန်းမာရေး, နောက်ဆုံးရသတင်းများ, ဆက်ဆံရေး, ဥပဒေ
မီဒီယာတစ်လှည့်ကွက်လွဲချော်ခဲ့ဖူးပါသလား တစ်ဦးညစ်ညမ်းအလေ့အထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက် - ထို Damian Green ကဇာတ်လမ်းနှစ်ခုအချက်များအတူတကွဆက်သွယ်ထားသောပုံပြင်များဖြစ်ကြသည်ရှိရာမိမိအပါလီမန်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဥပဒေရေးရာညစ်ညမ်း၏ကြီးမားသောတစီးကို၏တွေ့ရှိချက်ကဖြစ်စေခဲ့သည်ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း? အဆိုပါအာရုံစိုက်အများဆုံးဖွယ်ရှိတဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ပြဿနာတစ်ခုသာလက္ခဏာကြောင်းအာဏာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေ Harvey Weinstein နဲ့ Kevin Spacey မကြာခဏလေးနက် porn အလေ့အထပါဝငျသောရောဂါ '' လိင်စွဲလမ်း '' များအတွက်ကုသမှုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ ရဲ့အများဆုံးဂျာနယ်လစ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။
ဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်သနည်း? အရိပ်အမြွက် - ကလူကြီးလူကောင်းရဲ့မဂ္ဂဇင်းအဟောင်း၏ခေါ်ဆောင်သွားဒီဗီဒီကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ခုနစ်သန်းအစည်းအဝေးများတစ်ဦးတည်းအကြီးဆုံးပံ့ပိုးပေးသဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗြိတိန်၌အပျတျောမူနေကြသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံမှန်ကြည့်ရှုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်အရအခွင့်အရေးနှင့် misogynist အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့သညျလူအနည်းဆုံး 10% အလုပ်မှာခက်ခဲ-Core အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရန်ဝန်ခံ။ တချို့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်စေအဲဒါကိုဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်။ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတွေန်းကျင် Damian Green က၏နှုတ်ထွက်စာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်အရှုပ်တော်ပုံဟာရေခဲတောင်သာအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သေးဘာမျှမသိမမြင်ရဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ဦးနှောက်-အာရုံစူးစိုက်ပညာရေးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ငါတို့သည်သုံးကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနေတဲ့အမူအကျင့်ရောဂါအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဒါဟာဦးနှောက် function ကိုများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဖွင့်ဓာတုပစ္စည်းများမဟုတ်ပါဘူး။ 2018 အတွက်ရောဂါများ၏ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေ "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" ဟုခေါ်သစ်တစ်ခုအမျိုးအစားမိတ်ဆက်ပေးရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။ ဒါဟာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ compulsive အသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ လူကြိုက်များဘာသာစကားမှာယင်း၏အသုံးပြုမှုနေသော်လည်း, စကားလုံး "စွဲ" မဟုတ်တော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ digests အတွက်လျှောက်ထားသည်။ မည်သို့ပင်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်း, ရလဒ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, သုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်း
အသစ်က Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအင်တာနက် "အာရုံကိုစီးပွားရေးကို" ၏တပြင်လုံးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဆုလာဘ် ကိုယျ့ကိုယျကိုယခုထက်နောက်ပိုင်းတွင်။ လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်။ အဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှား, လက်လှမ်းတတ်နိုင်နှင့်အမည်မသိအခါသူကတောင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှပဲလုပ်-ယုံကြည်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်တစ်ဆန္ဒရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်၏အလားအလာကိုထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စရိုက်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်ကပိုပြီး excites ။
အဆိုပါသတင်းဆိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းယနေ့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း arousal ၏ supernormal အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကြပြီမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကျိုးကိုစနစ်၏အလွန်အကျွံဆွ, ထရန်3နာရီတစ်ပါတ်တောင်အလယ်အလတ်အသုံးပြုမှု, စာသားကဦးနှောက်၏အမှုဆောင်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျော့သွားတယ်။ ကျနော်တို့တဏှာ-သွေးဆောင်, အန္တရာယ်များအပြုအမူအပေါ်ဘရိတ်ထားရန်အားကြီးသောအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဥဩအလုပ်အကိုင်များဆက်ဆံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးသူရဲကျောက်ပေါ်သို့အများအပြားတစ်ခု unwary အင်တာနက် surfer ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးရောဂါမတူဘဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ compulsive ကြည့်ရှုဆိုတာတွေ့ရဖို့ခက်ခဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများမနည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ အာဏာကိုဘေးဥပဒ်, ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးနဲ့ဘယျသူမှမအောငျလည်းအဆိုပါရောဂါ၏တစ်ဦးအသှငျအပွငျဖြစ်နိုင်သည်။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျား, ယခု ပို. ပို. နုပျိုအမျိုးသမီးတွေ compulsive အသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ။ ကျနော်တို့မျက်မြင်အတိုင်းအသက်ကြီး, ဆက်ဆက်ကကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိကြပေ။
ဒုတိယ, တန်းတူရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မူဝါဒများနှင့်၎င်း၏ဖြစ်ပွားမှုလျှော့ချရန်အစီအစဉ်ကိုအထောက်အထားတောင်းအားလုံး FTSE 100 ကုမ္ပဏီတွေရဲ့များရှိရေးသားထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်တစ်ခုလုံးအဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းထိခိုက်ကြောင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလွန် passive မိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည် Hypermasculised ရန်လိုသည့်အပြုအမူခက်ခဲ-Core ညစ်ညမ်းပုံဆောင်ပါ။ ရိုးရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မူဝါဒများဒီကိစ္စကို၏စိတ်နှလုံးမှမရကြဘူး။ ထိုသို့သောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အဖြစ်ယန္တရားများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအချို့စိတ်ဖိစီးမှုအန္တရာယ်ရှိပါတယ်နှင့်အသုံးပြုခြင်း (မသိစိတ်) compulsive ဖြစ်လာသည့်အခါဥပဒေရေးရာအလုပ်ရှင်များအတွက် liabilities အဖြစ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကိုန်ထမ်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့ သာ. ကောင်း၏။
တတိယအချက်အများစုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်မှာမည်သည့် compulsive အသုံးပြုမှုရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာသည်းခံစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ '' မြင့်သော 'သို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးရမယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကအတူတူပိုဆိုလိုသည်။ porn နှင့်အတူကအသစ်နှင့်ပိုပြီးထိတ်လန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်များပစ္စည်းကိုဆိုလိုသည်ကတော့ Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုသာလွန်းစိတ်အားထက်သန်သောအရာ။ ဤသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အထူးသဖြင့်ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းအတွက်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းမှဥပဒေရေးရာ porn ကနေမြင့်လာကိုဆိုလိုသည်။ ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုအစီရင်ခံစာများအရေအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ် 80 တိုင်ကြားမှုများပျမ်းမျှတစ်ရက်လက်ခံရရှိအတူလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်းရာခိုင်နှုန်း 112 အားဖြင့်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ဗြိတိန်တွင်ဦးရစ်သရဖူတရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုလက်ရှိထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြသည်။ -Norfolk ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ဦးစီးချုပ် Constable, ရှိမုနျကို Bailey, သောင်းချီလိင်ကလေးများအလွဲသုံးစားလုပ်စိတ်ဝင်စားနေသောယောက်ျား၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ခန့်မှန်းထားသည်။
စကော့တလန်အတွက်သရဖူရုံး၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အဆိုအရ Justiciary ၏တရားရုံးချုပ်အတွက်ကြိုးစားခဲ့ခံရလေးနက်လိင်ရာဇဝတ်မှု၏ဖြစ်ရပ်ဝန်ယနေ့ 20 ကျော်% မှနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်လွန်ခဲ့တဲ့ 75% န်းကျင်ကနေသွားပြီ။ ပိုကောင်းတဲ့အစီရင်ခံ, မုဒိမ်းမှုကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်နှင့်တရားမျှတမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒအပါအဝင်ဒီအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ သို့သော်တိုင်ကြားချက်များ၏အဆင့်မြင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အပြောင်းအလဲ၏အစပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရှင်းလင်းစွာထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်မောင်းနှင်အားဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးမှတဆင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးဖြစ်နိုင်ပါ့မလားနှင့်လိုအပ်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ကကျယ်ပြန့်နိုင်သမျှအဖြစ်လူသိများစေကြကုန်အံ့, သိကျွမ်းခြင်းပညာရှိသည်။
ငါတို့သည်လူတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးအကြားယုံကြည်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် compulsive porn အသုံးပြုမှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏နှုန်းထားများလျှော့ချဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်ကျယ်ပြန့်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းပြုစုပျိုးထောင်ပညာရေးနှင့်အသိအမြင်ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရန်ရှိသည်။